Cheap ibe ya bụrụ akụkụ carbon carbon factory na suppliers | Ouzhan
Carbon nchara bu iron-carbon alloy nke nwere carbon nke 0.0218% rue 2.11%. A na-akpọkwa ya carbon steel. Ohaneze, ọ na-enwe obere silicon, manganese, sọlfọ, na site. N'ozuzu, ihe dị elu nke carbon carbon, nke ka ukwuu na-esikwu ike ma nwekwuo ike, ma ọ bụ obere plasticity. A na-ejikarị eriri carbon carbon CNC eme ihe n'ọtụtụ ebe ma dabara adaba maka ọtụtụ akụkụ igwe.
Carbon nchara na-akpachapu-nkenke ihe nchara ahihia ahihia
Ouzhan ga-eji aka ya hazie akụrụngwa dị ka ihe osise na ihe ndị ị chọrọ. Gingkwa ifo bụ usoro nhazi nke na-eji igwe eji eme ihe iji tinye nrụgide na oghere ọla iji mepụta nrụrụ plastik iji nweta mgbaghara na ụfọdụ ihe eji arụ ọrụ, ụdị ụfọdụ na nha. Forging (ibe ya bụrụ na zọ) bụ otu n'ime isi ihe abụọ. Gingkwaa mmepụta bụ otu n'ime ndị isi nhazi ụzọ na-enye n'ibu akụkụ blanks na ígwè n'ichepụta ụlọ ọrụ. Site na ịkpụzi, ọ bụghị naanị ọdịdị nke akụkụ akụrụngwa ka enwere ike ịnweta, kamakwa usoro dị n'ime nke ọla ahụ nwere ike ịbawanye mma, yana akụrụngwa akụrụngwa na nke anụ ahụ nwere ike ịbawanye mma. N'ozuzu, akụkụ dị mkpa kachasị mkpa nke nwere nnukwu nrụgide na ihe dị elu chọrọ site na iji usoro mmepụta. Akụkụ ndị dị mkpa dị ka ihe na-eme ka turbine generator, rotors, impellers, blades, ring ring, nnukwu hydraulic press column, akwa cylinders, rolling mill, mpịakọta engine engine combustion, njikọ njikọ, gia, bearings, and artillery in the Defense industry are ihe niile mepụtara.
Uru nke carbon ígwè esorowo akụkụ
- Gbaa mbọ hụ na continuity nke metal eriri nzukọ
- Mma nke anụ ahụ ọla
- Meziwanye ihe plastik na n'ibu nke ọla
OEM ahaziri carbon ígwè ibe ya bụrụ ọrụ-China Shanghai CNC carbon ígwè ibe ya bụrụ akụkụ emeputa
Ouzhan bụ onye nrụpụta na - agbakwunye ụlọ ọrụ na azụmaahịa, na - enye ọrụ ndozi ntụgharị na igwe nhazi igwe. Dị ka ndị ahịa chọrọ, ọ nwere ike hazie carbon ígwè na mụ na a pụrụ ịdabere na elu-nkenke CNC esorowo akụkụ. A na-arụpụta akụkụ igwe ndị a site na iji akụrụngwa kachasị mma, nke a na-enweta site na ndị na-ebubata ngwa ahịa a ma ama.
Ndị ọrụ ọrụ aka anyị siri ike na ọkachamara na njikwa ọrụ na usoro ọrụ nke ọma nwere ike hụ na nrụpụta zuru oke nke carbon nchara iji mezie akụkụ. Ke adianade do, na CNC esorowo carbon ígwè ngwaahịa nyere kpam kpam na-erube isi àgwà na ike ga-eji dị iche iche ulo oru ngwa. Na anyị nwere ike inye mpi ọrụ maka carbon ígwè CNC ibe ya bụrụ ngwaahịa na anyị kpọrọ ahịa.
Ouzhan carbon ígwè esorowo akụkụ nhazi akụkụ uru
(1) ibe ya bụrụ adabara nhazi dị iche iche n'ime na elu adiana na-ebupụta. Ogologo nhazi usoro nhazi bu zhiIT13 ～ IT6, na ihe ojoo Ra uru bu 12.5 ～ 1.6.
(3) Forging nwere ike ime mgbanwe na ihe owuwu, ihe onwunwe, mmepụta ogbe, wdg nke workpiece, na ọtụtụ-eji. Na mgbakwunye na ịkpụ ụdị ígwè dị iche iche, nkedo nkedo, na ọla na-enweghị ike, o nwekwara ike ịmịpụta ndị na-abụghị ọla dịka faiba glaasi, bakelite, naịlọn na ihe ndị ọzọ. N'ihi na ụfọdụ ndị na-abụghị ferrous ọla ndị na-adịghị adabara-egweri, diamond-atụgharị ngwá ọrụ nwere ike ji mee ihe maka ezi ibe ya bụrụ, nke nwere ike inweta elu machining ziri ezi na obere elu ike ike ụkpụrụ.
(4) Ewezuga akụkụ adịghị elu nke oghere ahụ, ọtụtụ mgbaghara na-aga n'ihu igbutu ya na akụkụ obe ya. Ya mere, ikike ịkpụkpụ na-agbanwe obere, usoro nchacha ahụ bụ nke kwụsiri ike, nke na-enyere aka belata oke ọsọ na ike dị ike, ma nwee arụmọrụ dị elu.
Uru nke Ouzhan Carbon Steel Forging Service
-Niile nkenke CNC esorowo carbon ígwè ngwaahịa bụ isiokwu siri ike mma nnyocha.
- Site na eserese ma ọ bụ ihe nlele iji mepụta nkenke carbon nchara esororo.
Nke gara aga: OEM Hot Extrusion esorowo Parts
Osote: Ahaziri carbon ígwè esorowo akụkụ
Na-akpụ akpụ akụkụ igwe anaghị agba nchara